Home भिडियो कार्टुन्स क्रुजको नया भिडियो ‘जिस्काम्छे मुइयाले’ सार्बजनिक………. भिडियो
नेपालकै एक नम्बरमा पर्ने डान्स क्रु हो कार्टुञ्ज क्रु। आफ्नो हरेक गीतमा नौलो सैलीमा भिडियो प्रस्तुत गर्ने कार्टुञ्ज क्रु को नया भिडियो सार्बजनिक भएको छ। गायक सुरज श्रेष्ठले गाएको गीत ‘जिस्काम्छे मुइयाले’ मा उनीहरुले आफ्नो प्रस्तुति देखाएका हुन्। निकै रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको यस गीतको को भिडियोमा दर्शकले हरेक पल मनोरंजन लिने पक्का छन्।
दिपक शर्माले लेखेको यस गीतलाई स्वयम् उनि आफैले संगीत भरेका छन्। निकै रमाइलो शैलीमा कार्टुन क्रुज माथि फिचरिङ गरिएको गीत आकर्षक भिडियो सहित सार्वजनिक गरिएको हो । यस भिडियोमा आश्मा विश्वकर्मा, सरोज अधिकारी, लाक्पा डी लामा, राम घले, सुविन चौहान, साजन चौहान लगायतको अभिनय रहेको छ भने क्यामराले खिच्ने काम ज्ञानेन्द्र शर्माले गरेका छन्। हरेक गीतको भिडियो लाइ जस्तै गरि द कार्टुन क्रुले आफैले यस गीतको कोरियोग्राफी को जिम्मा सम्हालेका छन्। यस भिडियोलाइ सरोज अधिकारीको निर्देशन गरेका छन्।
दिपावली मनाउन तयार हुनुस भन्दै गर्जिए ओलि (भिडियो सहित)
धुर्मुस प्रधानमन्त्री बने ५ बर्षमा देश बनाउने यस्तो योजना ! हेर्नुस ( भिडियो सहित )
नेपाली चेलीको इराकमा संकास्पद मृत्यु ! आङ्गकामि र रवि लागे सत्यतथ्य खोज्न ( भिडियो )
SELECT p.ID AS id, p.post_title AS title, p.post_author AS uid, v.pageviews FROM `wp_posts` p INNER JOIN (SELECT SUM(pageviews) AS pageviews, postid FROM `wp_popularpostssummary` WHERE view_datetime > DATE_SUB('2019-06-16 23:10:42', INTERVAL6DAY) GROUP BY postid) v ON p.ID = v.postid WHERE 1 = 1 AND p.post_type IN('post') AND p.post_password = '' AND p.post_status = 'publish' ORDER BY pageviews DESC LIMIT 10 OFFSET 0;